Ibolaa fi Afrikaa Dhiyaa
Hagayya 29, 2014
Afrikaa dhiyaa Keessaatti lakkobsii namoota dukkuba Ibolaan qabamanii dabalaa jira. Biyyonni Ibolaan keessatti argame Laayberiyaa seeraaliyoon Ginii fi Naayjeriiyaa ta’uun ibsamee jra. Garuu namni hedduun kan keessatti dhukkubichaan qabamee fi du’aa jiru Laayberiyaa ta’uun ibsamee jira.
Lammiwwan Amerikaa lama kanneen dawaa yaalii dhaaf hojii irra oole fudhatanii fayyuuf akkuma carraa argatan Doktorri biyya Naayjeriyaa tokko fi Lubnii waldaa kristaanaa lammii Speen ta’an immo dawaa kana gargaaraman iyyuu du’an boqochuun isaanii gabaafamee jira.
Briteen lammi ishee seeraaliyoon keessatti dhukkuba Ibolaan qabame gara Londonti kan deebiste yoo ta’u waaltaan to’annaa fi ittisa dhukkubootaa kan Amerikaa hojjataa isaa biyya Afrikaa dhiyaa keessa ture tokko nama Ibolaan qabame wajjin ture jechuu dhaan hordoffii barbaachisu gochuuf gara biyyaatti deebisee jirti.
Kanneen Hidhaa Ba’an Maal Jedhu?
Ijoollonni Somaaliyaa Harka Al Shabaab Keessaa Miliqfaman
Haasaa Hamtuu Traamp Dubbatan Nu Aarse: Ambaadaadderoota Afriikaa
Haagganaan Garee Mormituu Zimbaabwee Balaa Hilikoopteraan Du’an